Saldhigyada tareenka waa inay ku yaalliin bartamaha magaalada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulXarumaha Tareenadu waa inay ku yaalaan bartamaha magaalada
13 / 02 / 2013 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Professor, Waaxda Gaadiidka, Jaamacadda Farsamada Yıldız. Dr. Zerrin Bayraktar, Nidaamka tareenka xawaaraha dheer waa inuu ahaadaa badhtamaha magaalada saldhiga waa in lagu tilmaamaa kuwan soo socda:
“Tareenka xawaaraha sare leh ee 800 waa nidaam awood u leh inuu la tartamo diyaaradaha xawaarehoodu yahay ilaa kiiloomitir. Muuqaalka ugu muhiimsan ee bartamaha magaalada waa xarunta. Maxaa dhacaya hadduusan joogin rugtaas? Dadku waxay ku soo degeen Istanbul tareen kale oo waxay yimaadeen Istanbul iyagoo ka yimid Sabiha Gokcend. Wax macno ah ma sameynayso. Magaalooyinka sida Cologne iyo Paris, xawaaraha tareenka xawaaraha ku socdaa wuxuu ku dhacayaa magaalada isaga oo yareynaya 15-20 illaa kiiloomitir. ”
Bayraktar, halka ay taageerayaan Mashruuca Marmaray ee Haydarpaşa iyo Sirkeci Garages'nın kama fikirin suurtagalnimada xidhitaanka, "hadafka halkan lagu dhammeeyo howsha TCDD," ayuu yidhi.
Ujeeddada ayaa ah in laga bixiyo kirada dhulka dadweynaha
Mithat Ercan, tareenka xawaaraha sare ku socda iyo Mashaariicda Marmaray, ayagoo ku tilmaamaya badhtamaha magaalada in ay tahay "isbadal magaalo" oo hoos imanaya magaca kirada oo loo yeedhay si loo abuuro, ayuu yidhi.
Mithat Ercan, Haydarpaşa Solidarity, 104 waxay sanado u shaqeyneysay xarun, Istanbul waxay astaan ​​u noqotay hidaha dhaqanka Haydarpaşa iyo dekada, waxayna u adeegtey sidii xarun loogu talagay xarunta 123 Sirkeci waxay muujisay inay rabaan inay sii wadaan shaqada warshadaha:
Tarihi Labada saldhig ee taariikheedba waa keli oo dadweynuhu waxay ku qanacsan yihiin inay yihiin dysfunctional. Intii lagu guda jiray dhismaha Mashruuca Marmaray, ugu yaraan afar sano, Istanbul ma lahan xiriir waddo-tareenka Yurub iyo Anatolia. Mashruuca ka dib, Haydarpaşa Gara waxaa loo qorsheeyay in aanu keenin tareenada caadiga ah Anatolia iyo Orient Express iyo tareennada Regional Express ee ka socda magaalada Sirkeci ee Yurub. Haddii mashruucan dhaca ah, oo ay ku jiraan halista ugu weyn ee danaha shacabka ah, la fuliyo, iskudayadayada aan uga digno shacabka in waxyeelada aan la beddeli karin ay ka dhici doonto deegaanka dabiiciga ah, qaab dhismeedka bulshada, taariikh ahaan iyo muuqaal ahaan magaalada ayaa sii socon doona. ”
TCDD ayaa dacweynaya İBB
TCDD waxay heshiis la saxiixatay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ee diyaarinta iyo qiimeynta mashruucyada isbeddelka magaalooyinka ee xaddiga dhan 2 Mitir oo laba jibaaran, oo ay ku jiraan Sirkeci iyo Xarunta Haydarpasa, oo hoos imaanaysa lahaanshaha Istanbul.
Si kastaba ha noqotee, TCDD waxay go'aansatay inay joojiso oo joojiso fulinta qaybta ka dhanka ah howlgalka tareenka Naz da ee 1 / 5000 Scale Master Plan ee Ilaalinta Deegaanka Taariikhiga ah ee Degmada Fatih ee ay diyaarisay IMM.
Haydarpaşa Solidarity waxay xustay inay taageersan yihiin dacwada ay soo gudbisay TCDD ee ka dhanka ah mashruuca isbedelada saldhiga Sirkeci waxayna tiri TCDD waa iney joojiso mashruucyada isbadalka Haydarpaşa iyo Sirkeci Station.
Isha: waxaan www.skyturkxnumx.co
Marka baabuur-kumbiyuutarku aanu ka shaqeyn Uludağ, dalxiisayaashu waxay ku sugnaayeen barafka
Metrobus oo aan waxtar lahayn Kumanaan qof ayaa ku socotay
Meelaha Naples, rakaabku waa inay socdaan
Wasiirka Arslan `, koraan Turkiga zorunda` la dulmay
Tareenada Goboleedka ee Express
nidaamka tareenka dhakhso ah
Tareenka tareenka ee Yedikule-Sirkeci
Shaqada Isku-xirka Tareenka ee Usküdar Çekmeköy ayaa bilaabmay